NYI LYNN SECK 18+ DEN: July 2006
ဂူဂယ်လ်ကနေ ဂျီတော့ခ်ကို ဘီတာဗားရှင်း အသစ် ထပ်မံ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖိုင်တွေပို့လို့ရပြီ။ ဗွိုက်စ်မေးလ်ဆိုတဲ့ လူမရှိရင်လည်း အသံ ထားခဲ့လို့ရပြီ။ ကိုယ်ဖွင့်နေတဲ့ သီချင်းတွေ နာမည်တွေကို ရှဲလ် လုပ်လို့ရနေပြီ်။ တှောတှောလေး အဆင့်မြင့်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်အရ ဖိုင်းယားဝေါလ် အသုံးပြုသူတွေ သူအသုံးပြုတဲ့ အဝင်အထွက် Port တွေကို မပိတ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပိတ်မိထားရင် ဖိုင်ပို့တာ လက်ခံတာ၊ ဖုန်းခှေါတာ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့် ဖိုင်းယားဝေါလ်မှာ ဂျီတော့ခ်ကို ပိတ်ထားတာ မတွေ့ပေမယ့် ခုနက ပြောတဲ့ ပေါ့တ် တွေကို ပိတ်ထားမိမယ် ဆိုရင်လည်း အသုံးပြုလို့ ရမှာ မဟုတ်တာကို ဂရုပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပ်ဒိတ် လုပ်ပြီးသွားရင် အောက်ကလို Send File ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေး တစ်ခု ပှေါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုဒ်ကို ဒီနေရာမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ [ Filehippo ] Gtalk Beta 1.0.95
Technorati Tags: Gtalk, Google, Gtalk Beta 1.0.95
Posted by NLS at 7/30/2006 11:40:00 AM0comments Links to this post
Yesterday I gotainvitaion ticket for the Opera of " Dance and Die with Wolves" sponsored by Le Mariana. The ticket price is 135! quite expensive but it is average for such wonderful concert. So I made up my mind to go there. Unluckily, they dont allow to bring cameras or any other recorders, so i can not show you of its sences after that, ya sorry. Btw, I did forget to tell you one thing that I invited my self, and there is no Coliseum Amphitheater in the whole Inda. :P
Technorati Tags: Fun, Tool, Ticket
Posted by NLS at 7/30/2006 11:26:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော မြစ်ကြီးနား မှာ ကျောင်းတက်မယ် ဆိုတော့ ကျောင်းရွေးရတယ်။ ထ(၁)နဲ့ ထ(၃)က အပြိုင် နာမည် ကြီးနေတယ်။ လောလော လတ်လတ် ထ(၃)ကျောင်းက အကိုကြီး တစ်ယောက်က ကချင်ပြည်နယ် ပထမ ရထားတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ကျွန်တှော ထ(၃)ကို ရွေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တှော အဲဒီမှာတက်တော့ ၉တန်း ကျောင်းသားပေါ့။ ဒုတိယအစမ်း ဖြေခါနီးမှာ ကျွန်တှော ပြောင်းလာတာပါ။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေက ကျွန်တှော့ကို ဝိုင်းအကဲခတ် ကြတယ်။ ရန်ကုန်က ပြောင်းလာတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်ဆိုတော့ ဘာများ ထူးခြားမလဲပေါ့။ ဘာမှ မထူးခြားပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တှောက အဲဒီအချိန်တုန်းက အတှော အရှက်အကြောက် ကြီးတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တှော့ကို ပထမဆုံး စကားပြောပြီး နှုတ်ဆက်တဲ့ ကျောင်းသား နာမည်က ခွန်းအောင်တဲ့။ ကျွန်တှောတို့ အခန်းက မှောနီတာပါ။ သူရယ် ကျွန်တှောရယ် ယဉ်ထွန်းရယ် စိုးနေဝါးရယ် အတူတူ ထိုင်ကြတယ်။ ပတ်လည်မှာ အဟောက် တို့ကောင်တွေ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တှော့လက်ရေးက တှောတှောလှပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တှော့စာအုပ်တွေ တောင်းကြည့်ပြီး လက်ရေးလှကြောင်း ချီးကျူးကြတယ်။ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က စာကူကူး ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ (ဘယ်သူလည်းတော့ မမေးကြနဲ့ဗျာ) တကယ်တော့ သူတို့အားလုံး ကျွန်တှော့ထက် ဉာဏ်ကောင်းပြီး စာတှောကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စာတွေကူးနေရင်း တစ်ပါတ်လောက်ကြာတော့ ကျောင်းမှာ စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီး စာရင်း လာကောက်ပါတယ်။ ကျွန်တှောက စာရင်းပေးတော့ သူတို့တွေ အံ့အားသင့်နေကြတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တှောက စာစီစာကုံး တစ်ကျောင်းလုံး ပထမ၊ ကဗျာ ဒုတိယ ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မြို့နယ် အဆင့်ပြိုင်ရတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တှောနဲ့ အရမ်းခင်သော သူငယ်ချင်း ဖြစ်လာမယ့် ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနားမှာ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းခလေး နင်နဲ့ငါ မပြောဘဲ မင်းနဲ့ငါ ပြောကြတယ်။ ရောက်ခါစ ဆိုတော့ ကျွန်တှော့နားမှာ ရိုင်းသလို ရင့်သလို ခံစားရတယ်။ မြို့နယ် အဆင့် ပြိုင်အပြီးမှာ ကျွန်တှော့သူငယ်ချင်း နိုင်လင်းထွန်းက ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ သူက သူ့ကိုယ်သူ ကျွန်တှောလို့ ပြောတယ်။ ထ(၁)ကပါ။ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ အမြဲတမ်း လက်ရွေးစဉ်ကြီးပေါ့။ သူနေတဲ့ အိမ်က ကျွန်တှောနေတဲ့ နေရာနဲ့ သိပ်မဝေးပါဘူး။ ကျွန်တှောတို့က ရေကူးကန်နားက သီတာရပ်မှာ နေကြတယ်။ အဲဒီ ပြိုင်ပွဲမှာ မြို့နယ်အဆင့် သူကပထမ၊ ကျွန်တှောက ဒုတိယ ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ ပြိုင်လာကြရာက သူနဲ့ ကျွန်တှော တှောတှောလေး ခင်သွားပါတယ်။ သူက ခုနက ကျွန်တှော့သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အကောင်းဆုံး စာသင်ဝိုင်း တစ်ခုမှာ တစ်ဝိုင်းတည်း အတူတက်နေကြတာပါ။ ကျွန်တှော့ အဖို့ကတော့ ဝိုင်းကြေးလည်း မတတ်နိုင် နောက်မှလည်း ရောက်လာဆိုတော့ ကိုယ့်စာ ကိုယ်ကျက်ရပါတယ်။ မှတ်မိသေးတယ် ရောက်ပြီး သိပ်မကြာဘူး စာမေးပွဲ စစ်တော့ ကျွန်တှော့ အဆင့်က ၅၉။ အမေဆိုတာ မျက်လုံးကို ပြူးလို့။
အဲဒီကောင်မလေးကို ကျွန်တှောက ပူစီကတ်လို့ ခှေါပါတယ်။ ကျွန်တှောက စကားများတော့ သူနဲ့ အတှော အတိုင်အဖောက် ညီပါတယ် (သူကလည်း အတှော စကားများသည်ဟုမှတ်)။ သူက ကျူရှင် ပြန်လာရင် ကျွန်တှောတို့ အိမ်ဘက် လှည့်ဝင် လာတတ်တယ်။ ပြီးရင် ကျွန်တှောတို့ တောင်ရောက် မြောက်ရောက် စကားတွေ ပြောကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလည်း သူ့နောက်က လိုက်လာတဲ့ ကျောင်းသားကြီးများ ရန်ကို ရှောင်ရှားဖို့ ကျွန်တှော့ အိမ်ဘက်မှာ ခြေယောင်ဖျောက်တဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တှောက ကဗျာတွေ ဘာတွေ ရေးနေပါပြီ။ ကျွန်တှောရေးထားတဲ့ ကဗျာတွေ သူ့ကို ပေးဖတ်ရင် ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် သူက ထောက်ခံတတ်သူပါ။ ကျွန်တှောက အစအနောက် အရမ်းသန်သူမို့ သူ့ကို မျိုးစုံ စနောက် တတ်ပါတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ ကျွန်တှောက သိုက်ကလာတာ ဘာညာ၊ အသက် ၂၀ ပြည့်ရင် ဘယ်ပြန်ရမှာ ညာပြန်ရမှာ ဘာညာတွေ သူ့ကို စပါတယ်။ ကျွန်တှော့မှာ အမြွှာပူး ညီတစ်ယောက် ရှိတဲ့အကြောင်း၊ ငယ်ငယ်ထဲက ကွဲသွားတဲ့အကြောင်း၊ အဖိုးကြီး တစ်ယောက်က ဆွေမျိုး လာစပ်တဲ့အကြောင်း၊ အဲဒီညီက ကျွန်တှောနဲ့ တစ်ပုံစံ ထဲပဲ ဆိုတဲအကြောင်း ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး။ စုံနေတာပါပဲ။ အမှန်ကတော့ ကျွန်တှောက အဲဒီအရွယ်တုန်းက သူငယ်ချင်း ခရေဇီ ရှိပါတယ်။ နယ်မြေ အသစ်မှာဆိုတော့ အသစ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေကိုလည်း ကိုယ့်ခင်သလို သူတို့ ပြန်ခင်စေချင်လို့ စနောက်မိတဲ့ သဘောပါ။ နောက်ပိုင်း သူက နင်ပြောတာတွေ ငါမယုံပါဘူး လို့ ပြောပေမယ့် အဲဒီတုန်းက ငါ့ဘဝက ၂ဝမှာ သေရတော့မှာပါဟာ၊ ရှေးဟောင်း ကျိန်စာ ဆိုတာကလည်း အခက်သားလား ဘာညာပြောရင် မျက်ရည်လေး အဝိုင်းသားနဲ့ ခင်ဗျ။ ကျွန်တှောနဲ့ သူနဲ့ အတှောပေါင်းမိတော့ သူ့ကြိုက်တဲ့ ကောင်တွေကလည်း ကျွန်တှော့ကို မျက်မုန်း ကျိုးတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တှော တို့ကတော့ လေလေး တချွန်ချွန် စကားလေး တပြောပြောနဲ့ လေပေးကို ဖြောင့်လို့။
သူဟာ ကျွန်တှော့ အိမ်ရှေ့ တံခါးကန့်လန့်ကို ဘယ်လို ဖွင့်ရမလဲဆိုတာ သိပါတယ်။ ကျွန်တှော မနက် အိပ်ယာ မနိုးရင် လာလာ နှိုးတတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁၀ တန်းနှစ်ကျတော့ သူရန်ကုန်မှာ သွားတက်ပါတယ်။ သူရန်ကုန် ရောက်သွားပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ စာအဆက်အသွယ် မပြတ်ကြပါဘူး။ ကျွန်တှောကလည်း အားရင် အားသလို စာရေးပြီး စနောက်တတ်သလို သူကလည်း ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်တွေ ရေးသားပြီး ကျွန်တှော့ကို ဆရာ လုပ်တတ်ပါတယ်။ သူမရှိတဲ့ နောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် စာစီစာကုံး လက်ရွေးစဉ် ဘဝကို ကျွန်တှောက သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ အာဆီယံ ပထမဆုံးအကြိမ် ဉာဏ်စမ်း ပဟေဠိမှာ ကျွန်တှော နိုင်ငံတှော အဆင့် ဆုရတယ်။ သူကလည်း စာစီစာကုံးမှာ ဆုရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၁ဝတန်းပြီးတော့ ကျွန်တှော ရန်ကုန် ဆင်းလာတဲ့အခါ သူနဲ့ ပြန်တွေ့ပါတယ်။ အရင်ကလိုပဲ စကားများဆဲ၊ ကျွန်တှော့ကို ဆရာကြီး လုပ်ဆဲ၊ အရပ်ပုဆဲပါ။ တခါတလေ တော့လည်း ကျွန်တှောတို့ ဘီစီမှာတွေ့ပြီး ကှောဖီတွေ ဘာတွေ သောက်ဖြစ်ကြတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တှော ရေကြောင်းသိပဿပံ တက်ဖြစ်တော့ သူနဲ့ သိပ်မတွေ့ဖြစ် တော့ပါဘူး။ သူလည်း စကဿငာပူမှာ ပှေါလီသွားတက် လိုက်တယ်။ ၂ဝဝဝခုနှစ် စကဿငာပူကို ကျွန်တှော ပထမဆုံး ရောက်ချိန်မှာ ကျွန်တှော့ သူငယ်ချင်းဟာ ညကြီး တကူးတက လာတွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တှော အတှောပဲ ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက သူ့ပုံစံက အရင်ကလို မဟုတ်ဘဲ စကတ်တိုနဲ့ ဝေါ့ကင်းန်းရှူးနဲ့ ဖြစ်နေတော့ တှောတှော မြင်ပြင်း ကတ်မိပါတယ်။ အဲဒီကနေ ထပ်ပြီး မတွေ့ဖြစ် ကြတော့တာ ၂၀၀၃ ခုနှစ် အထိပါပဲ။ ကျွန်တှော စကဿငာပူကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူက ကျောင်းပြီးလို့ ထူးချွန် အောင်မြင်နေသူ ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်တှော ရောက်ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး။ သူအမေရိကားကို ဆက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ သူ့အီးမေးလ် လိပ်စာ၊ နေရပ်လိပ်စာ လည်းမသိ၊ သူ့သူငယ်ချင်း တွေနဲ့လည်း မသိတော့ အဆက်အသွယ် ထပ်ပြတ် သွားလိုက်တာ ဟိုတစ်နေ့က သူ့အီးမေးလ် လာမှပဲ ကျွန်တှောတို့ ပြန်ကွန်တက် ရတော့တယ်။ သူ အဆင်ပြေတာ သိရလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်တှော့ အပှေါမှာ သည်းခံ တတ်တဲ့၊ နားလည် တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း သူ့ကို ကျွန်တှော ထာဝရ သတိရ ကျေးဇူး တင်နေမိမှာပါ။ ကောင်းရာ သုဂတိလားပါစေ။ အဲလေ ယောင်လို့။ အမြဲ နားလည် ခင်မင်နိုင်ပါစေ ခိုင်သက်အောင်ရေ။ All the best wishes !
Technorati Tags: Khine Thet Aung, Myitkyina, Friend, Diary, Nyi Lynn Seck, Khaing Thet Aung
Posted by NLS at 7/29/2006 02:43:00 AM 1 comment Links to this post
Labels: Memoir, Myitkyina
Posted by NLS at 7/28/2006 08:16:00 PM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့ကို မြန်မာပြည်မှာ မွေးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ ကျွန်တှော့ကို နှစ်ခါ မွေးဖွားခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယမြောက် မွေးဖွားခြင်းက ကျွန်တှော့အတွက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုရင် ကျွန်တှောဟာ ဆရာကြီး ဦးဘခင်နဲ့ တွေ့ခဲ့ပြီး ဓမဿမတရားကို ရရှိခဲ့လို့ပါပဲ။ ပထမတစ်ကြိမ်က အမိဝမ်းကနေ မွေးဖွားလာပြီးတော့ ဒုတိယအကြိမ် ဥခွံကိုဖောက်ခွဲ ထွက်လာရတဲ့ ငှက်တွေလိုပါပဲ။ ဓမဿမတရားကို ရရှိပြီးနောက်မှာ ကျွန်တှောဟာ ယုံမှားသံသယ၊ တွေဝေထုံထိုင်းမှု၊ မောဟတရား အားလုံးကနေ ကင်းလွတ် ဖောက်ထွက် နိုင်ခဲ့ပြီး အသစ်ဖြစ်လာ ခဲ့ရတယ်။
Myanmar is my motherland. I was born here. Myanmar gave me two births. And the second birth is more important for me because I got Dhamma here. As the bird has got two births: one birth coming out of the mother's womb, and the second birth coming out of the shell of the egg. My mother gave me first birth, and Sayagyi U Ba Khin gave me the second birth- I received Dhamma, broke the shell of ignorance andanew Goenka came out of it.
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂါ World Buddha Summit မှာ ပြောသွားတဲ့ စကားလေးပါ။ တှောတှောလေး နှစ်သက်မိပါတယ်။ ဆရာကြီးကို မနဿတလေးမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဝိပသဿသနာ ဆရာကြီး ဦးဘခင်ရဲ့ လက်ရင်း တရားအမွေ ဆက်ခံသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီး ဟောကြားတဲ့ တရားများထဲမှာ ဗုဒဿဒဟာ ဘာသာတရားကို ဟောကြားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျင့်ကြံရာ တရားကို ဟောကြားသူ ဖြစ်တယ် ဆိုတာလေးကိုလည်း သဘောကျမိပါတယ်။ တကဿကသိုလ် တက်နေစဉ် ကာလတုန်းက ဆရာကြီး မြန်မာပြည်မှာ တရားလာပြရာ ဝကဿငဘာလမ်းမှာ ကျွန်တှောတို့ သူငယ်ချင်းများ စနေ၊ တနဂဿငနွေ သွားသွားပြီး ဝိပသဿသနာ ရှုမှတ်ကြပါတယ်။ ကျယ်ဝန်းပြီး ဆိတ်ငြိမ်လှတဲ့ အဲဒီ နေရာလေးမှာ လူတွေ ပြည့်ကျပ် နေပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာ တရားရှုမှတ်နေစဉ်မှာ စိတ်ကို ဘယ်လိုထားရမယ် ဆိုတာကို အခန်း တစ်နေရာကနေ အဂဿငလိပ်လို မိုက်နဲ့ သွန်သင် ဟောပြောပေးပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မဟာစည် ဆရာတှော ဘုရားကြီးရဲ့ ရှုမှတ်ပုံနဲ့ ဆင်တယ်လို့ ပြောနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ စိတ်ရွေ့လျားရာကို သတိနဲ့ လိုက်မှတ်နေရတာမျိုးပါ။
Technorati Tags: Goenka, Religion, Sri Satya Narayan Goenka
Posted by NLS at 7/28/2006 06:20:00 PM0comments Links to this post
Attention : Some Adult scences contain
[ Main Gallery Here ]
Technorati Tags: Surrealist, Seamless Pictures, Painting
Posted by NLS at 7/28/2006 05:46:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/27/2006 03:40:00 PM0comments Links to this post
ငါစိတ်ညစ်တာတွေ မင်းကို မကူးစက် စေလိုပါ။ ငါ့ပြသဿသနာကို မင်းကို မကူးစက် စေလိုပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ငါမျက်နှာကို အမြဲ ပြုံးပျှောနေအောင် မင်းရှေ့မှာ ထားခဲ့တယ်။ ပြသဿသနာ တစ်ခုခု ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း ဒါဟာ ငါ့ကြောင့်ဆိုပြီး ငါကပဲ ခေါင်းခံခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ လောင်နေတဲ့ မီးကို နောက်တစ်အိမ်မှာ မလောင်စေချင်လို့ ငါနှစ်ဆ လောင်မြှိုက်ပစ်လိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ငါ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ တရားက ပုဂဿဂလိက မဆန်ဘူး။ အမြင်ကျဉ်းစွာ တစ်ဦးတစ်ယောက် အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ချစ်တယ်ဆိုတာ မချစ်ရင်တောင်မှ သူများကို ဒုကဿခမပေးခြင်း လို့ ငါယူဆမိတယ်။ ဒီအတွက် ငါဟာ ဘာအပူအပင်မှ မရှိတဲ့ကောင်၊ မင်းတို့ကြောင့် ဘာပြသဿသနာမှ မကြုံရတဲ့ကောင်လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ငါ့အတွက် ငါ့လို လူတစ်ယောက် ရှာမတွေ့ခဲ့တာတော့ ငါစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
တစ်ရက်မှာ သူကို ကျွန်တှော ပြောတယ်။ ကျွန်တှောက ဘိန်းနဲ့ တူတယ်လို့။ သူက ဘာဖြစ်လို့လည်းတဲ့ အဲလို ပြန်မေးတယ်။ တကယ်တော့ ဘိန်းဆိုတာလည်း သူ့ဘာသာ ရှိနေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါကို လူတွေက အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပြောင်းလဲပြီး ဆန်းကြယ်စွာ သုံးနေကြတာ။ သူ့ရဲ့ စွဲလမ်းစေတတ်တဲ့ သတဿတိဟာ မူရင်းစွဲ သတဿတိပဲ။ ဒါကို ထပ်ပြီး စွမ်းလာအောင် သူတို့ လုပ်ကြတယ်။ လာပတ်သတ် ကြတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ ဒီဘ်ိန်းဖြူဟာ မကောင်းပါဘူး ဆိုပြီး နာမည်ဆိုး တပ်လိုက်တော့တယ်။ တကယ်ဆို ဘိန်းမကောင်းဘူး ဆိုရင် အစတည်းက သွားမပတ်သတ် ခြင်းသာ အကောင်းဆုံး ကြိုတင် ကာကွယ်မှု ဆိုတာ သူတို့ သိသင့်ပါတယ်။
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Myanmar
Posted by NLS at 7/27/2006 01:17:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/27/2006 12:38:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/26/2006 10:12:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/24/2006 03:37:00 PM0comments Links to this post
မြန်မာဘလော့ခ် လုပ်ချင်သူတွေ အဆင်ပြေအောင် အသုံးဝင်တဲ့ အချက်တွေကို ရေးသားထားတဲ့ ပိုစ့်တွေကို ကျွန်တှော စုထားလိုက်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးရင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ တှောတှောများများ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်တွေ့ရင် တွေ့သလို ဒီနေရာလေးမှာ တင်ထားပေးပါ ဦးမယ်။ အဆင်ပြေပြေ ရှာနိုင်အောင် ညာဘက် ဆိုဒ်ဘားမှာ လင့်ခ်ကို ဖှောပြထားပေး ပါမယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းစနစ်တွေ ရှိရင်လည်း အကြံပေး နိုင်ပါတယ်။
ဒါတွေဖတ်ပြီးမှ မြန်မာဘလောခ့် လုပ်ပါ။
How to Assign Zawgyi-One font in Blog [NLS]
Comment Tracking [NLS]
Essential Tools for making Myanmar Blog [NLS]
How to Install and use Zawgyi-One font Properly [NLS]
How to Install and use Alpha Zawgyi Keyboard [NLS]
Myanmar Unicode Keyboards and Keyboard Layouts [NLS]
Making Catagories in Blogger with Del.icio.us [Dathana]
Making Catagories in Blogger only [NLS]
Making Link Tracking and Page Load Counter [NLS]
Making Menu Bar [Arloo]
Del.icio.us Code for Sharing Music in Blog [Emotional Corner]
Windows Media Player for Blog [Mg Hla]
How to make Embedded EOT font [Dathana]
Making Embedded EOT font [Mg Zeng]
Zawgyi to Win Font Converter [Mg Hla]
Win to Zawgyi Converter [Lil Master]
Share your favourite post with Google Reader [Zero Topic]
Making Favicon ( icon in address bar ) [NLS]
Brilliant Buttons Maker [Mg Yoe]
Online Photo Edting Tools [NLS]
Best Freewares [NLS]
Myanmar Blogs and Bloggers Directory [NLS]
Myanmar Bloggers Community [Fat Punk]
Technorati Tags: Myanmar Blog, Myanmar Blogger, Making Myanmar Blog, Myanmar Unicode, Essential Tips, Nyi Lynn Seck, Myanmar Blogger Direcotry, Essential Tools for Blog, Photo Editing Tools, Buttons Maker, Font Converter, Myanmar Blogger Directory, Myanmar Unicode, Keyboard Layout, Essential Blogging Tools, Nyi Lynn Seck
Posted by NLS at 7/23/2006 12:11:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/23/2006 07:38:00 AM0comments Links to this post
Great idea, nice commercial design! [ Smoy ]
Technorati Tags: Commercial Design
Posted by NLS at 7/23/2006 07:22:00 AM0comments Links to this post
တစ်ချို့ ကိုယ်ခနဿဓာ အစိတ် အပိုင်းတွေက ကျွန်တှော ဖြည့်ထားတဲ့ အတုတွေပါ။ မူရင်းပုံမှာ မပါတာတွေကို ဖန်တီးယူ ရပါတယ်။
Tags: Htoo Eain Thin, Nyi Lynn Seck, Myanmar, Nyi Lynn Seck
Posted by NLS at 7/23/2006 06:57:00 AM0comments Links to this post
ScatterChat isaHacktivist Weapon designed to allow non-technical human rights activists and political dissidents to communicate securely and anonymously while operating in hostile territory. It is also useful in corporate settings, or in other situations where privacy is desired. It isasecure instant messaging client (based upon the Gaim software) that provides end-to-end encryption, integrated onion-routing with Tor, secure file transfers, and easy-to-read documentation. Its security features include resiliency against partial compromise through perfect forward secrecy, immunity from replay attacks, and limited resistance to traffic analysis... all reinforced throughapro-actively secure design.
[ Scatter Chat ]
Technorati Tags: Chat, IM, Scatter Chat
Posted by NLS at 7/23/2006 06:51:00 AM0comments Links to this post
ဖို့ဖ် မဂဿဂဇင်းရဲ့ စစ်တမ်းအရ အကျှောကြားဆုံး Celebrity ၁၀၀ စာရင်းမှာ တွမ်ခရုစ်က ထိပ်ဆုံးက ပြေးပါတယ်။ တိုက်ဂါးဝုဒ်က နံပါတ် ၅ နေရာမှာ ရှိပြီး ဒါဗင်ချီကုဒ် ရေးသားသူ ဒန်ဘရောင်းက နံပါတ် ၁၀ ချိတ်ပါတယ်။ ကျွန်တှော ကြိုက်တဲ့ ဘက်စကတ်ဘောလ် ကစားသမား ရှကွီအိုနီးလ်နဲ့ ရှောနယ်လ်ဒင်ဟိုက ၄၁ နဲ့ ၅၃ နေရာမှာပါ။ ရှာနာပိုဗာ လေးကလည်း ၆၃ မှာ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေများနဲ့ အသေးစိတ်ကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ [ Fobes 100 ]
Technorati Tags: Fobes Celebrity 100
Posted by NLS at 7/23/2006 06:42:00 AM0comments Links to this post
I m not in mood. I feel like unconscious. Sometime I sit onachair and gaze the stupid computer monitor foralong time, meaninglessly. I know I m thinking something but I dont know what I m thinking. I tried to write down my feeling, unfortunately unsuccessful! Sometime I miss someone but I dont know who is. I m exhausted. I m more than tired. I think I m extra in this society. Now I dont wanna do anything. My brain and memory are cracked and drained. I need to ask myself to do many works to pass such situation. I still remember the words " Run Forrest! Run! " from Forrest Gump. I love it, but how long i still have to run? Recently there are three important things to do first, 1. to stop seriously smoking, 2. to stop much spending on net. 3. to sleep at night and wake up early.
Posted by NLS at 7/22/2006 06:10:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/21/2006 09:56:00 AM0comments Links to this post
ကမဿဘာပှေါမှာ တွေ့ရတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေ အကြောင်း ဝဘ်ဆိုဒ်ပါ။ အသေးစိတ် ဓါတ်ပုံများနဲ့တကွ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ဂရပ်ဖစ်လုပ်ရင် အသုံးပြုဖို့ ဓါတ်ပုံတွေ ကူးယူပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တွေ့ရတဲ့ ပုရွက်ဆိတ် မျိုးစိတ်တွေ ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ ပုရွက်ဆိတ်တွေက ၁ ပတ်လောက်ပဲ အသက်ရှည်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ တစ်လနီးပါး သက်တမ်း ရှည်ကြတာလည်း မှတ်သား လိုက်ရပါတယ်။ [ Antcyclopedia ]
Posted by NLS at 7/21/2006 07:29:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/20/2006 11:06:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/20/2006 06:21:00 AM0comments Links to this post
Technorati Tags: Superman, Fun
Posted by NLS at 7/19/2006 08:06:00 AM0comments Links to this post
ဘလော့ခ်ကို နဲနဲ ပြင်လိုက်တယ်။ မညီမညာ ဖြစ်နေတဲ့ Rss Feed Logo တွေကို အသစ် ပြန်လုပ်တယ်။ သူငယ်ချင်း တွေရဲ့လင့်ကို ပုံလေးတွေ လိုက်ထည့်တယ်။ ဘာမှသာ မဟုတ်ပေမယ့် တှောတှော အချိန်ကုန် လက်ဝင်ပါတယ်။ ဒီဆိုဒ်ကို ဘန်းထားပေမယ့် ဖိုင်းယားဖောက်စ် ကောင်းမှုနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ဝင်လို့ ရနေပါတယ်။ ဒီမှာရေးရင် ရွှေမြို့တှောကြီးမှာ လိုက်ဘန်းနေမှာ စိုးတာကြောင့် မရေးတော့ပါဘူး။ သိချင်ရင် မေးလ်နဲ့သာ မေးပါတော့။ Blogger Censorship လုပ်တာကို ဆနဿဒပြတဲ့ အဖွဲ့ကို မဲပေးလိုက်တယ်။ ဝင်ရောက် လှုံ့ဆှောတယ်။ တစ်ချို့ ISP တွေ ပြန်ဖွင့် ပေးနေပြီ ကြားတယ်။ ကျွန်တှော့ဆီမှာတော့ ပိတ်နေတုန်းပဲ။ အစိုးရက ဘက်ကလည်း သူတို့ ပြီးသွားရင် ပြန်ကောင်းပါမယ်လို့ ကြေငြာထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ ဒီကကောင်တွေနဲ့အတူ ပြန်မဖွင့်မချင်း ဟိုအှောဒီအှော လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ မှတ်မှတ်ယယ ဒီနေ့ အာဇာနည်နေ့။ ဟိုးအရင် ကလေး ဘဝကဆို နေ့လည်ပိုင်း မိုးလေးတွေ ဖွဲဖွဲဖွဲဖွဲ ရွာနေတတ်တယ်။ ရေဒီယိုက ဥဩဆွဲရင် မတ်တပ်ရပ် ငြိမ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို အလေးပြုရတယ်။ ပြီးရင် ရေဒီယိုကနေ တို့ဗမာဆိုတဲ့ သီချင်းလာတယ်။ အခုဆို မကြားရတာ ကြာနေခဲ့ပြီ။
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Blog, 19.07.2006
Posted by NLS at 7/19/2006 07:06:00 AM0comments Links to this post
မွန်ဘိုင်းမှာ ဗုံးပေါက်တာက ဒီဘလော့ခ်တွေ ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်တာမို့ ဒါကို ပိတ်တယ်ဆိုပြီး ကုလားပြည် သတင်းစာက ရေးတယ်။ ၁ ရက် အတွင်းမှာပဲ ဒီက လူတွေ တှောတှောလေး ရုတ်ရုတ်ပြာပြာ ဖြစ်သွားကြတယ်။ လုပ်တဲ့ အထာက ပါကစဿစတန်တို့၊ တရုတ်တို့၊ ဗမာပြည်တို့ အထာမို့လို့။ ခဏလေးအတွင်းမှာ အင်တာနက်ပှေါမှာ အဲဒီ သတင်းက ရေပန်း အစားဆုံး ဖြစ်လာတယ်။ လုံခြုံရေးကို အကြောင်းပြပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို ဖိနှိပ်တာဟာ မကောင်းပါဘူး။ ပြောလိုက်တဲ့ လူအတွက်ကတော့ အေးအေး ဆေးဆေးလေးပဲ။ ဒါနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဒီလို ဖြစ်တာလား ၊ ဒါဆို ပိတ်လိုက်ကွာ ဆိုပြီး ပုစွန်ဦးနှောက်နဲ့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အကျိုးရှိတာ အများကြီး လုပ်နေသူတွေ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးကုန်တယ်။ မကောင်းမှု လုပ်ချင်တဲ့ သူဟာ ဒါနဲ့ မရရင် ဟိုဟာနဲ့ လုပ်မှာပဲ။ ဟိုဟာမရရင် နောက်တစ်မျိုး ပြောင်းလုပ်မှာပဲ။ ဒီလိုမျိုးသာ လိုက်ပိတ်နေရရင် နောက်ပိုင်း အစိုးရတွေက ပရိုက်ဗေဆီ ဆိုတာကို အမြဲချိုးဖောက် နေကြတော့ မှာလား။ နောက်ဆုံး ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးပါ ပိတ်ပင်ရတော့မှာလား။ အခု မြန်မာပြည်မှာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်မရဘူးလို့ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောတယ်။ သေချာပါတယ်။ ပညာတတ်တွေ သိပ်ပေါလာမှာ စိုးရိမ်နေတယ်နဲ့ တူတယ်။ သောက်ရမ်းပဲ့တယ်။ ကျွန်တှောကတော့ ဒီမှာ အားလုံး အေးဆေး ဖြစ်သွားပြီ။ သူတို့ ပိတ်ထားပေမယ့် ပွင့်နေတဲ့ အပေါက်တွေက ပွင့်နေတယ်။ အဲဒီကနေ ဝင်လို့ရတယ်။ ကဲအဲဒါ လုပ်လိုက်ရတာနဲ့ တှောတှော ပင်ပန်းသွားပြီ။ အိပ်လိုက်ဦးမယ်။
Technorati Tags: Human Rights
Posted by NLS at 7/18/2006 03:08:00 PM0comments Links to this post
ကုလားပြည်မှာ ဘလော့ခ်ဂါကို ဘန်းလိုက်ပြီဗျာ။ မနေ့ကတည်းက တစ်နေ့လုံး ဝင်မရ ဖြစ်နေတာ ခုမှ သတင်း ဖတ်ရတော့တယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ အမည်ခံထားပြီး စုတ်ပဲ့လိုက်တာ။ အခုတောင် ပရောက်ဆီကနေ ဝင်နေရတယ်။ ကိုယ့်ဘလော့ခ်တောင် ကိုယ်ပြန်မဖတ်နိုင်တဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေပြီ။ တှောတှော တင်းနေတယ်။ အေးဗျာ အတတ်နိုင်ဆုံး ဒီဘလော့ခ်လေး အသက်ဝင်နေ အောင်တော့ ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်။ ၁ ပါတ်လောက် ကြာလို့မှ တက်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် ၅ လလောက် သေနေပြီလို့ မှတ်လိုက် ပါတော့ဗျာ။ စိတ်ဓါတ်ကျတယ်။
ကံကောင်းလို့ အရင်က ကွန်မန့်ကို ဟဲလိုစကန်မှာ ပြောင်းလုပ် ထားလိုက်တာ မှန်သွားတယ်။ ကွန်မန့်တွေ အကုန် ဖတ်လို့ ရပါတယ်။ Post ကတော့ တင်လို့ရတယ်။ ရိုးရိုး ဝင်ဖတ်လို့သာ မရတော့တာ။ ဒီမှာတော့ ဆနဿဒပြပွဲတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်ဦးမှာ မြင်ယောင်နေတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တှောလည်း ဝင်ပြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ရေရေလည်လည် သောက်ရမ်းပဲ့တယ်။
Technorati Tags: Blogger was banned in India
Posted by NLS at 7/18/2006 10:53:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/17/2006 06:38:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/16/2006 11:51:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/16/2006 09:05:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/16/2006 11:36:00 AM0comments Links to this post
Well, now you may attach photos in your comments. This is very cool idea. Just simple clik on that attach button. Thank Helloscan!
Tags: Nyi Lynn Seck
Posted by NLS at 7/16/2006 07:55:00 AM 1 comment Links to this post
See more beautiful Myanmar Photos here : [ Technolandphoto ]
Technorati Tags: Myanmar, Shwedagon, Photo
Posted by NLS at 7/16/2006 07:40:00 AM0comments Links to this post
Uploadabuddy Image for your email address and share it with the world!!
Tags: Fun, Interesting, Tool, Nyi Lynn Seck
Posted by NLS at 7/16/2006 07:02:00 AM0comments Links to this post
တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တှော့ အဖေက မေးတယ်။ ဘဝမှာ ထူးထူးခြားခြား ဘာလုပ်ချင်လဲတဲ့။ ကျွန်တှော မဆိုင်းမတွ ပြန်ပြော လိုက်တယ်။ ကလောလို၊ မေမြို့လို နေရာလေးမှာ ခြံအကျယ်ကြီးဝယ်၊ မြက်ခင်းတွေစိုက် ပြီး သာယာ အေးချမ်းတဲ့ အရိုးပြာ မြှုပ်တဲ့ နေရာလေး လုပ်ချင်တယ်လို့ ဆိုတော့ အဖေက ခပ်တွေတွေ စဉ်းစားပြီး အင်း အဲဒါ မြန်မာပြည်မှာ လုံးဝ မရှိသေးတဲ့ အရာပဲလို့ ပြန်ပြောတယ်။
ကျွန်တှောက ခရစ်ယာန်တွေ သေဆုံးသွားရင် လုပ်တဲ့ ဆုတောင်းပွဲ အခမ်းအနား လေးတွေကို အရမ်းသဘော ကျပါတယ်။ အားလုံးက တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် လေးပဲ။ မျက်ရည်တွေ ကျနေတယ်။ အှောဟစ် ဆူညံနေတဲ့သူလည်း မရှိဘူး။ အေးချမ်းတယ်။ အဲဒီ အိုင်ဒီယာလေးကို ယူပြီး ကျွန်တှော့ နေရာလေးမှာ အဲလို လုပ်ချင်တယ်။ သေသွားတဲ့ သူတွေရဲ့ အမှတ်တရ ပစဿစည်း၊ ဒါမှမဟုတ် အရိုးပြာ တစ်ခုခုကို မြှုပ်နှံခွင့် ပေးမယ်။ လူတစ်ယောက် အတွက် ၁ပေပတ်လည် အုတ်ပြား သေတဿတာလေး တစ်ခုရမယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကိုယ်ထည့် ချင်တာလေး ထည့်လို့ရမယ်။ မြက်ခင်းလေးတွေက စိမ်းနေမယ်။ စံကားပန်းတွေနဲ့ ထင်းရူးပင်တွေကို ညီညီညာညာ စိုက်ထားမယ်။ ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာကို တွေးလို့ ရနေစေချင်တယ်။ နှင်းပွင့်နဲ့ လေအေးလေးတွေ တိုက်နေမယ်။ ငှက်ကလေးတွေ ပျံနေမယ်။ အဝေးကနေ ကြည့်ရင် အုတ်ပြား ဖြူဖြူလေးတွေကိုပဲ မျက်စိတစ်ဆုံး ညီညီညာညာ မြင်နေရမယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အမှတ်တရ နေရာလေးဟာ သာယာ အေးချမ်း နေသင့်တယ်။ သက်ဆိုင်သူ တွေကလည်း အဲဒီလို အေးချမ်းတဲ့ နေရာလေးမှာ သူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အမှတ်တရ ကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေကို စဉ်းစားမိ နေလိမ့်မယ်။ ကျောက်ပြားလေးမှာ ကဗျာတစ်ပုဒ်၊ စာတစ်ကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု ရေးထိုးထားချင်ရင်လည်း ရေးထိုးပေးမယ်။
ကျွန်တှော တကဿကသိုလ် တက်စဉ်က ထောက်ကြန့် စစ်သခဿငျိုင်းထဲ ခဏခဏ သွားပြီး အဲဒီ အုတ်ပြားလေးတွေမှာ ရေးထားတဲ့ စာသားလေးတွေကို အခါခါ သွားဖတ်ဖူးတယ်။ သိပ်ပြီး ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးစရာ ကောင်းတယ်။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ နာကျင်နေတဲ့ နှလုံးသားကို မြင်လာရတယ်။ ကျွန်တှော သိပ်နှစ်သက်တယ်။ ကျွန်တှော သေဆုံးသွားရင် အဲဒီလို နေရာမျိုးလေးမှာ အမှတ်တရ တစ်ခုခု ရေးထိုးပြီး ကျောက်ပြားလေးတစ်ချပ် အဖြစ် ကျန်ရစ် နေချင်တယ်။ သူများတွေ အတွက် ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ အတွေးအခှေါ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ အထင်သေး စရာ အကြံအစဉ် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှော့ အတွက်တော့ သိပ် အဓိပဿပာယ် ရှိလွန်းလှပါတယ်။
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Myanmar, Idea
Posted by NLS at 7/16/2006 02:08:00 AM0comments Links to this post
ညီမလေးအတွက် အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်များ
ကျွန်တှော့ ညီမလေးမှာ ဖြူစင်တဲ့ လက်ကလေးတွေ ရှိတယ်။ သိပ်ပြီးလည်း နူးညံ့တယ်။ မိန်းခလေးဆိုတာ အလှအပကို ချစ်မြတ်နိုးရတယ် ညီမလေးရဲ့လို့ ကျွန်တှော ပြောရင် လက်ခုပ်လေး တီးပြီး ဒါကြောင့် ကိုကို့ကို သိပ်ချစ်တာ လို့ သူပြောလေ့ ရှိတယ်။ ညီမလေး ငယ်ငယ်ထဲက သူ့မိဘတွေ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တှောနဲ့ သူနဲ့တွေ့တော့ ကျွန်တှော့ အသက်က ၂၅ သူ့အသက်က ၁၉ တကဿကသိုလ် တစ်ခုရဲ့ ကင်တင်းန်မှာ တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ သူက ကျွန်တှော့လိုပဲ ကှောဖီခါးခါးကို နှစ်သက်တယ်။ မိန်းခလေး တှောတှောများများက ကှောဖီချိုချိုလေးတွေ သောက်တတ်တော့ ဘာလို့ ဒါမျိုး သောက်တာလဲလို့ ကျွန်တှောမေးရင် ကိုကိုနဲ့ တူချင်လို့လို့ သူပြန်ဖြေတတ်တယ်။ သူ့ဆံပင်လေးတွေက နီညိုရောင် ခပ်ဖျော့ဖျော့လေးတွေ။ သူလျှောတဲ့ ခေါင်းလျှောရည်က ပရုတ်နံ့ သင်းနေတတ်တဲ့ အမျိုးအစား။ သူ့လက်သည်း လေးတွေက သွယ်သွယ်လေးနဲ့ ကြည်နေတယ်။ သူ့လက်ကလေးတွေကို ကျွန်တှော ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် သူသဘောကျ နေတတ်တယ်။ ညီမလေးကို ကိုကို ချစ်တယ်လို့ ပြောရင် ကိုကို့အကဿငျီတွေ မီးပူ တိုက်ပေးချင်တာလို့ သူပြန်ပြောလေ့ ရှိတယ်။ ကျွန်တှော ပန်းချီ ဆွဲနေရင် သူနောက်ကနေ ဖက်ပြီး ကျွန်တှော့ကို အလစ် နမ်းတတ်တယ်။ သူက ကျွန်တှော့လို နီယိုအင်ပရက်ရှင်းကို မကြိုက်ဘဲ အက်ရှင်ပိန်းတင်းကို ကြိုက်တာ ဆိုပြီး တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တှော့ ကင်းန်းဗတ်စ် တွေပှေါမှာ ဆေးတွေ လျှောက်ပက် နေတတ်တယ်။ သူဆွဲတဲ့ ပန်းချီကားလေးတွေ ကျွန်တှော သိမ်းထားတယ်။ မူကြိုခလေးတွေ ဆွဲတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ တူလို့။ ကျွန်တှောဟာ အခါပေါင်းများစွာ သူဆွဲသလို လိုက်ဆွဲကြည့်တယ်။ ကျွန်တှောဆွဲတဲ့ လူတွေက လူတွေနဲ့ တူနေတယ်။ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တှော လိုချင်တာ ညီမလေးလို ဘာမှမသိတဲ့ စိတ်နဲ့ ဆွဲချင်တာ။
ညီမလေး မိဘတွေက ငယ်ငယ်ထဲက ဆုံးပါးသွားတာ ဆိုတော့ ညီမလေးဟာ ပုံပြင်တွေကို ညအိပ်ချိန်မှာ နားမထောင် ခဲ့ရဘူး။ ကျွန်တှော သူ့ကို အတူနေဖို့ ပြောတဲ့အခါ ကိုကို ညီမလေးကို နေ့တိုင်း ညအိပ်ယာဝင်ရင် ပုံပြောရမယ်လို့ ကတိတောင်းတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ညပေါင်းများစွာ ကျွန်တှောဟာ ညီမလေးကို ပုံပြင်တွေ ပြောပြခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ဆို ညီမလေးက မျက်မှောင်လေး ကျုံ့ပြီး ကျွန်တှော့ ရင်ခွင်ထဲမှာ နားထောင် နေတတ်တယ်။ မင်းသားလေး မင်းသမီးလေးတွေ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင် ညီမလေး မျက်ရည်တွေ ကျလာတတ်တယ်။ ပြောရရင် ကျွန်တှောကလည်း ပုံပြင်တွေ ကြိုက်တတ်သူ ဖြစ်တာမို့ ပုံပြောလည်း ကောင်းတယ်။ ညီမလေးက အဲဒီ အချိန်တွေမှာဆို အသံ တိတ်နေတတ်တယ်။ လောကကြီးက ကိုကို့ကို သူ့အတွက် မိဘတွေ နေရာကို အစားထိုးနိုင်ဖို့ လက်ဆောင်ပေးတာလို့ သူမကြာခဏ ပြောတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှော ပုံပြင်တွေ ပြောလာလိုက်တာ တစ်ထောင့်တစ်ည ပုံပြင်တွေလည်း ကုန်သွားတယ်။ နတ်သမီး ပုံပြင်တွေလည်း ကုန်သွားတယ်။ ဂရိ၊ ရိုမန် ပုံပြင်တွေလည်း ကုန်သွားတယ်။ လူထုဦးလှ တိုင်းရင်းသား ပုံပြင်တွေလည်း ကုန်သွားတယ်။ အန်ဒါဆင်းလည်း ကုန်သွားတယ်။ နောက်ဆုံး ပြောစရာ ပုံပြင်တွေ ကိုကို့မှာ ကုန်ပြီ ညီမလေးရဲ့လို့ ကျွန်တှော ပြောတဲ့အခါ - မရဘူး အဲဒါတွေ ကုန်သွားရင် ကိုကို တီထွင်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုပြီး ညီမလေး စိတ်ကောက် ပြပါတယ်။ ညီမလေး စိတ်ကောက်တဲ့ ပုံစံကို ကျွန်တှော အရမ်း ရယ်ချင်တယ်။ သူ ကျွန်တှော့ဘက်ကို လှည့်ပြီး ထိုင်နေရာကနေ တခြားဖက်ကို လှည့်ထိုင်လိုက်မယ်။ ခေါင်းကို လှုပ်ယမ်း ပြီးတော့ သူ့လက် ဖြူဖြူလေးတွေနဲ့ ဆံပင်တွေကို ရှုပ်ဖွ ပစ်တယ်။ ရပါတယ်. ရပါတယ် လို့ တတွတ်တွတ် ပြောမယ်။ မျက်ရည် ကျလာသလိုလို မျက်လုံးလေးတွေကို လက်နဲ့ သုတ်နေမယ်။ ဒါက သူအမြဲ လုပ်တတ်တဲ့ အမူအယာလေးတွေပါ။ ကျွန်တှောက ညီမလေးကို သိပ်ချစ်တော့ သူစိတ်ညစ်မှာကို မလိုလားပါဘူး။ သူပျှောနေတာကို ကြည့်ချင်တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှော သူ့ကို ညတိုင်း ကျွန်တှော့ ပုံပြင်အသစ်တွေ ပြောပြ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ မတူတဲ့ ကျွန်တှော့ ပုံပြင်တွေကို ကြားပြီး သူသဘောကျ သွားတယ်။ ညီမလေးတို့မှာ ပိုက်ဆံ ရှိလာရင် ကိုကို့ကို ပုံပြင်စာအုပ် ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကျွန်တှော့ နှဖူးလေးကို နမ်းနမ်းပြီး သူပြောတတ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ညီမလေး သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ညီမလေးဟာ ဒီပုံပြင်လေးတွေကို သူ့နောက်ဆုံး အချိန်အထိ နားထောင် သွားခဲ့တယ်။ ညီမလေး နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ပုံပြင်တွေကို ကျွန်တှော သူ့အတွက် အမှတ်တရ အနေနဲ့
ပြန်ရေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တှောက ညီမလေးကို သိပ်ချစ်တယ်။ ဒီပုံပြင်တွေဟာ ကျွန်တှော့ ညီမလေးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ငြိမ်သက်စွာ အိပ်စက်နေခဲ့တယ်။
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Tales, Story, Myanmar
Posted by NLS at 7/16/2006 01:10:00 AM0comments Links to this post
ဖွတ်မိကျောင်းဖြစ် မြစ်မချမ်းသာ ဆိုတဲ့ စကားလေးကို တှောတှော နှစ်သက် နေမိပါတယ်။ မိကျောင်းမှာက လျှာမရှိလို့ အရသာခံ မစားတတ် ပါဘူးတဲ့။ ဒါကြောင့် မြစ်ထဲမှာ နေတဲ့ ရေသတဿတဝါတွေ မကုန်ပါဘူး။ ဖွတ်ကတော့ အရင်ထဲက မြေတွင်းအောင်းပြီး ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ လျှာအရသာခံ စားတတ်သူ ဖြစ်လို့ ဖွတ်သာ မိကျောင်း ဖြစ်သွားခဲ့ရင် မြစ်ထဲက အကောင် အားလုံး သူ့အစာပဲ ဖြစ်တော့မှာလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး ဒါလေး ဖတ်ပြီး မြန်မာပြည်ကြီးက ကျွန်တှော နေခဲ့ရတဲ့ တောရွာလေး သွားသတိရ မိပြန်တယ်။ များလိုက်တဲ့ ဖွတ်တွေ ဖွတ်တွေဆိုတာ။ ကျွန်တှောတို့ ရွှေနိုင်ငံကြီးက မြစ်ချောင်းပေါတယ် တောပေါတယ်လေ။ ဆိုတော့ကာ ဖွတ်တွေလည်း ပေါတာပေါ့။ ဘယ်နှစ်ကောင် မိကျောင်း ဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာတော့ စာရင်း အတိအကျ မရှိပေမယ့် မနည်းဘူး မှတ်တယ်။ ထမံသီနယ်မှာ လူတောင် ကျားဘဝပြောင်းတဲ့ သမန်းကျား ဇာတ်လမ်း တွေလည်း ရှိခဲ့ဖူး ကြားခဲ့ဖူး တာကိုး။ ဖွတ်မိကျောင်း ပြောင်းတာက လောက်ကတော့ အပျော့ပေါ့။ တစ်နှစ်တော့ ကျွန်တှော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ နယ်ဘက်မှာ ကောလဟာလတွေ ထွက်လာတယ်။ ဘာနကဿခတ် ကပ်လို့ရယ်မသိ ဖွတ်တွေ မိကျောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ အားလုံး ထိတ်ထိတ်ပျာပျာပေါ့။ ရေကြောင်း ကုန်းကြောင်း သွားရင် သတိထားသွားပါ့မောင်၊ မတှောလို့ အဆင်မသင့်ရင် ဖွတ်ဆွဲခံ ထိနေပါ့မယ်၊ အဲဒါမျိုးတော့ သိကဿခာကျသဟေ့တဲ့ ။ အဲဒါ ရွာက အဖိုးကြီးတစ်ယောက် အမြဲ ပြောနေကျ စကား။ သူပြောတာလည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်ရယ်။ ဖွတ်ဆိုတဲ့ အကောင်မျိုးက လျှာအရသာ သိပ်သိတတ်တော့ ဟိုဟာမြင်လည်း စားချင် ဒီဟာမြင်လည်း စားချင် ကြာလာရင် လူတောင် ချမ်းသာပေးမယ် မထင်မိဘူးလေ။ ဒါနဲ့ ရွာက လူကြီးတွေက ကလေးတွေကို မိကျောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဖွတ်တွေနဲ့ မဆုံပါရစေနဲ့ သူတို့ဘေးက လွတ်ပါစေလို့ ညအိပ်တိုင်း ဆုတောင်းကြဖို့ တိုက်တွန်းကြရသတဲ့။
Technorati Tags: Myanmar, Nyi Lynn Seck , Varanus salvadori
Posted by NLS at 7/15/2006 01:27:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/15/2006 12:21:00 AM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/14/2006 01:11:00 AM0comments Links to this post
အင်း ဒီတစ်သက်တော့ ဝယ်စီးဖြစ်မယ် မထင်တော့ပါဘူးလေ။ အဝေးက ငေးကြည့်နေရုံပဲ တတ်နိုင်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့။ တန်ဖိုး အကြီးဆုံး ကားက Bugatti Veyron ဆိုတဲ့ ကားပါ။ ဒှေါလာ 1,700,000 လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ :) ။ မြန်မာပြည်ကို တင်သွင်းပြီး စီးချင်ပေမယ့် အလကားနေရင်း မတရား အခွန် အဆမတန်ပေးရမှာမို့ စီးချင်စိတ်လေး မြိုသိပ်လိုက်ပါတယ်။ စကဿငာပူမှာ စီးမယ် ဆိုတော့လည်း ကားရပ်နားခနဲ့ မွဲသွားနိုင်တယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါအသာထား တစ်နာရီ မိုင် ၂၅၀ ကျှောပြေးတာမို့ စကဿငာပူ တစ်ပတ် မောင်းရင်တောင် ရွှတ်ခနဲ ပြီးသွားမှာပါ။ ဒီကုလားပြည်မှာတော့ ဝယ်ပြီး နောက်တစ်ရက် ဆိုတာနဲ့ တစ်ခုခုက ဝင်တိုက်တာ ခံရမှာမို့ (ဒီမှာ ကားချင်းတိုက်လို့ ပိန်ရှုံ့ သွားတာလောက်ကို ရဲသွားခှေါရင်တောင် ရဲက အဖက်မလုပ်ပါဘူး ခင်ဗျား၊ အလျှော ရဖို့လည်း မစဉ်းစားပါနဲ့) ဒီကားများကို အလှပဲ ကြည့်နေလိုက် ပါတော့မယ်။
တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ကားဆယ်စီး [Click]
Technorati Tags: Bugatti Veyron, Ferrari Enzo, Pagani Zonda, Koenigsegg CCX, Porsche Carrera GT, Mercedes SLR McLaren, Maybach, Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Murcielago, Aston Martin Vanquish
Posted by NLS at 7/13/2006 11:19:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/13/2006 07:46:00 PM0comments Links to this post
Posted by NLS at 7/13/2006 05:38:00 PM 1 comment Links to this post
Greatest Photomontage Interactive!
Attention : need high speed connection at least 128kbs.
Via : 9
Technorati Tags: Photomontage
Posted by NLS at 7/13/2006 07:20:00 AM0comments Links to this post
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် လိုင်စင် ဆော့ဖ်ဝဲလ် သုံးသူများအတွက် ကိုယ့် Folder တွေကို အခြားသူ ယူကြည့် သုံးစွဲခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ Tool လေးတစ်ခု ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ခွင့် ပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကို သုံးစွဲမယ်ဆို အရင်က ကျွန်တှောတို့ သုံးခဲ့ရတဲ့ Truecrypt လို ဟာမျိုးကို သုံးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်မယ်ဆိုရင် မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က သူ့ အိုအက်စ် အစစ်အမှန် ဟုတ်လား မဟုတ်လား စစ်ဆေးပါတယ်။ ပြီးမှ ဒါကို ဒေါင်းလုဒ် ပေးလုပ်ပါတယ်။ အင်စတောလ် လုပ်ရတာလည်း မခက်ခဲပါဘူး။ ပြီးရင် ကိုယ့် Password ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ကျွန်တှောတော့ အတှောလေး နှစ်သက် နေမိပါတယ်။ မူရင်း လခ့်ကတော့ ဒီနေရာမှာပါ။ [MS] ရမရတော့ မသိပါဘူး အခြား အိုအက်စ် သုံးစွဲနေသူတွေ သုံးလို့ရအောင် ကျွန်တှော ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားတာကို ဒီနေရာမှာ တင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။ [PrivateFolder]။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က လူဆင်းရဲတွေကိုတော့ တရားစွဲမယ် မထင်မိပါဘူး။
မှတ်ချက်- XP Service Pack2အတွက်သာ။
Technorati Tags: Microsoft Private Folder
Posted by NLS at 7/13/2006 04:34:00 AM0comments Links to this post
တနေ့က အင်တာနက်လည်း မရသေးတာနဲ့ ပျင်းပျင်းရှိလို့ အီးဘွခ်တွေ ထိုင်ဖတ်နေမိတယ်။ မှောပီဆရာသိန်းကြီးရဲ့ ပါးစပ် ရာဇဝင်ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကိုတော့ တှောတှောလေး နှစ်ခြိုက်သွားမိတယ်။ ခေါင်းစဉ် တပ်ထားတဲ့ အတိုင်း ကျောက်ထက် အကဿခရာ တင်မထား၊ စာပေစာအုပ် အနေနဲ့ တင်မထားသေးတဲ့ ပါးစပ်သမိုင်း ရာဇဝင်တွေကို နေရာအနှံ့ လိုက်လံ မှတ်သားပြီး ပြုစုထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ကျွန်တှော မသိသေးတာ တှောတှောများများ သိလာရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘိုးတှောဗဒုံမင်း လက်ထက်က အမတ်ကြီး ဦးပှေါဦး၊ ရန်ကုန်မြို့ဝန် ဦးကျှောရွေး၊ မြင်းဝန် ဦးမြတ်ထင်နဲ့ နန်းမတှော မယ်နု၊ တရားသူကြီး ဦးအေးတို့ အကြောင်း အများဆုံးပါပါတယ်။ တစ်ချို့ အကြောင်း အရာတွေက စာအုပ်တှောတှောများများမှာ မတွေ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေပါ။ ဒီစာအုပ်ကို ၃ နာရီလောက်ကြာအောင် ဖတ်လိုက်ရပေမယ့် တန်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ မှောပီဆိုတာ မွန်ပြည်နယ်ဘက်က မှောပီ မြို့ဟောင်းကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်တိုင်း တိုက်ကြီး မြို့နယ်ဘက်က အခု မှောဘီလို့ ခှေါနေကြတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ကို ချယ်ရီသစဿစာမှာ ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Technorati Tags: Hmawpi Sayar Thein, Myanmar Ebook, Nyi Lynn Seck
Posted by NLS at 7/13/2006 03:58:00 AM0comments Links to this post
ကမဿဘာ့ဖလားပွဲမှာ ကျွန်တှော အရင်က အားပေးတဲ့ အသင်းက ဘရာဇီးလ် အသင်းပါ။ အီတလီကိုကတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်သစ်က အသည်းခွဲပြီးတဲ့ နောက်မှာ အီတလီက ပြင်သစ်ကို လက်စားချေပေးလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း အီတလီ အောင်ပွဲ ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မကျေမနပ် လုံးဝ မဖြစ်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးပိတ်ပွဲ ရောက်မှ အကြိုက်ဆုံးကို သွားတွေ့တော့တယ်။ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ သီချင်းဆိုသွားတဲ့ ရှာကီရာပါ။ ရေလည် ချစ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျန်ပုံများ မကြိုက်ပါ။ ဒီ ကမဿဘာ့ဖလားမှာ ဝတ်ဆင်ထားပုံလေးနဲ့ ကသွားတာလေးက သူနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလို့ပါ။ သီချင်း ခေါင်းစဉ်နဲ့ လိုက်ပါပေတယ်ဗျာ။ စက်ထဲမှာ ကူးထည့် ထားလိုက်တယ်။
Technorati Tags: Shakira, Hips Dont Lie
Posted by NLS at 7/13/2006 02:15:00 AM0comments Links to this post
စိုင်းစိုင်း ဆိုတဲ့ ကိုအောင်အောင်ရေ။ ကျွန်တှော့ ဘလော့ခ်ဟာ ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိပါဘူးဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီဘလော့ခ်လေး ဖြစ်အောင် အချိန်အကြာကြီး ကုဒ်ဒင် မတတ်တဲ့ ကြားက ကြိုးစား လုပ်ထားရတာပါ။ မြန်မာဘလော့ခ်တိုင်းကို ချစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို အသင့် ကူးချ တာမျိုးကတော့ ကျွန်တှော့ကို အတှော စိတ်ပျက်စေပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျား နိုင်ငံရေး လုပ်တာ ကိုယ့်စတိုင်လ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ပါ။ ဒီဘလော့ခ် လုပ်တာတောင် သူများဆီက အလွယ် ကူးချနေရင် ခင်ဗျားလိုလူမျိုး ပြောတဲ့ နိုင်ငံရေးစကား ဘာကို ယုံကြည်ရမလဲ။ Header ကအစ Footer အဆုံး အဲလို ကူးချတာကတော့ ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တှော့ ဆိုဒ်ဟာ ကျွန်တှော့ သူငယ်ချင်းများကို လွတ်လပ်စွာ စကားပြောချင်လို့ ဘာအကြောင်းနဲ့မှ အပိတ်မခံနိုင်လို့ နိုင်ငံရေး လွတ်ကင်းအောင် လုပ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်ပါ။ ဒါကို ခင်ဗျားက နိုင်ငံရေး ဘလော့ခ်မှာ ကျွန်တှော့ ပုံစံကို တစ်ပုံစံထည်း ယူခြင်းဟာ ကျွန်တှော့ကို အများကြီး ပြသဿသနာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါကလည်း အဲလို လူတစ်ယောက်က ကူးယူတာ ခံရပြီးပါပြီ။ ကျွန်တှော မကြိုက်ပါ။ စိတ်အတှော ဆင်းရဲတယ်ဗျာ။ လေတယ် တကယ်ပဲ။ အောက်က စာသားများကတော့ အထက်ပါ ဘလော့ခ်ပိုင်ရှင် ရေးသားထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ပိုစ့်တွေထဲက အချောင်သမားဆိုတဲ့ သဘော တရားလေးကို ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ ထိပ်ဆုံးက ပိုစ့်လေးပါ။ ကျွန်တှောကတော့ နိုင်ငံရေး မသိပါဘူး။ ကျွန်တှောသိတာ သူများဆီက မတရားသဖြင့် အချောင်နှိုက်တာကို အချောင်သမားလို့ ခှေါတယ် ဆိုတာပါပဲ။
မြန်မာ ပညာရှင်များသည် ပညာရှင်ဟူသော ဘွဲ့ထူးနှင့် လားလားမျှ မထိုက်တန်သူများ ဖြစ်ပေသည်။ လက်ဝဲဝါဒီတို့က ပညာတတ်ဉာဉ် ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အချောင်သမား ဝါဒကို ကျင့်သုံးသည့် ပညာရှင် ဆိုသူများကို ဝေဖန်တတ်သည်။ အခြေခံကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်း (Principle) မရှိဘဲ အခွင့်အလမ်း ကောင်းကိုသာ ချောင်းမြောင်း နေတတ်သည့် အမူအကျင့်မျိုးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ စွန့်လွှတ် စွန့်စားရသည့် အလုပ်ဆိုလျှင် ဝေးဝေးက ရှောင်ခြင်း၊ ရပ်တည်ရမည့် နေရာနှင့် ပတ်သက်လျှင် ဘာမှ ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိဘဲ တွေဝေ နေတတ်ခြင်း (ဤသည်ကိုပင် ဗုဒဿဓနည်းကျ အလယ်အလတ် လမ်းဖြစ်သယောင်ယောင် ပြောတတ်သေးသည်)၊ အခွင့်အလမ်း ရဖို့ဆိုလျှင် ရာဇဝတ်ကောင် အာဏာရှင် များအား “ကပ်ဖားယပ်ဖား” လုပ်ရန် ဝန်မလေးခြင်း စသည့် အောက်တန်းကျသော အမူအကျင့်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ စင်စစ် ယင်းအမူအကျင့် မျိုးကို ပညာတတ် ဉာဉ်ဟု ခှေါမည့်အစား အချောင်သမား ဉာဉ်ဟု ခှေါပြီး ယင်းဉာဉ်မျိုး ရှိသည့် ပညာရှင် ကိုလည်း အချောင်သမား ပညာရှင်ဟု ခှေါခြင်းသည်သာ အသင့်တှောဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း။
Screen Shot Here [ Click ]
Website Here [ http://sshangyi.blogspot.com ]
ဒီပုဂဿဂိုလ် ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဘယ်ကလည်းဆိုတာ ကျွန်တှော အကုန် သိလိုက်ပါတယ်။ မပြောချင်တော့ပါ။ ဒါကတော့ ပထမဆုံး တစ်ခါ တိုက်ရိုက် ကူးယူတဲ့ ဘလော့ခ် အကြောင်းပါ။ [Tun Ye Aung]။
Tags: Nyi Lynn Seck, Myanmar Blog, Stealing Blog
Posted by NLS at 7/07/2006 02:58:00 PM0comments Links to this post
Here is the nominatedplayers for the Fifa's Golden Ball award.
Here is my choice : Cannavaro ( Great Wall of Italy )
Technorati Tags: Golden Ball Nominations, Cannavaro
Posted by NLS at 7/07/2006 02:38:00 AM0comments Links to this post
ဒီနေ့ တနေကုန် စိတ်ချမ်းသာ နေတာလေးဟာ ကုလားပြည်က ကုလားကြောင့် ပျက်ပြားသွား ခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာ ဆရာတှော နှစ်ပါးက ကွန်ပြူတာ ဝယ်ချင်တယ် လိုက်ဝယ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းလို့ ရေမိုးချိုးပြီး ညနေဘက် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတှောများက ကားကို ငှားလာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆိုင်ရောက်တော့ သင့်လျှောရာတွေ ရွေးချယ်ပြီး Pentium43.0HT ဝယ်ပါတယ်။ ဆရာတှောက တစ်ခါတည်း ပြီးပါစေတော့ ဆိုပြီး အိုအက်စ်ပါ တစ်ခါတည်း သွင်းပေးဖို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့က အိုအက်စ် သွင်းပေးရမယ်ဆိုရင် ၂၅၀ ထပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ညနေ ၆ နာရီလောက် ကတည်းက စစောင့်နေတာ ၈ နာရီရီအထိ ဘာလုပ်နေပြီလည်းလို့ အဆက်မပြတ် မေးတော့ Yes Sir, Yes Sir ဆိုပြီး ခေါင်းလေး တခါခါနဲ့ အိုအက်စ် သွင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ မသကဿငာလို့ အထဲဝင်ကြည့်တော့ ခွေးကောင်များက စလုံးရေ မစ ရသေးပါဘူး။ ဒါကို ခွေးမသား ကုလားများက ကုလားလိုတွေ ပြောပြီး ရယ်နေကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ လူငယ်ဘဝက ဒေါသတွေက ပြန်ထွက်လာပြီး အပြီအပြင်ကို ဆဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကို အှောရကောင်းလားဆိုပြီး သူ့မန်နေဂျာက ဒေါသတကြီး ဆင်းလာပြီး ရန်လာတွေ့ပါတယ်။ သူကလည်းအှော ကျွန်တှောကလည်း အှော။ ဘုန်းကြီးကလည်း ထိုးမယ်လုပ်။ အတှောလေး စကားများကြပါတယ်။ အရင်စိတ်နဲ့ဆို အဲဒီက စက်တွေအားလုံး ရိုက်ခွဲ ပစ်မှာပါ။ ( ထိုရမ်းကားသော တစ်ခါတစ်လေ အလွန်ပြင်းထန်စွာ ထွက်တတ်သော ကျွန်တှော့ ဒေါသအကြောင်းကို ရေးပါဦးမယ် )။ သောက်ကုလားက ကျွန်တှောတို့ကို နားလည်မှု မရှိဘူး၊ အင်စတောလ် လုပ်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုပဲ ကြာတတ်တယ် ပြောလို့ မင်းဘယ်လောက်ကြေး လောင်းမလဲ ဒီစက်နဲ့ အိုအက်စ်ကို ဆင်တာသွင်းတာ ၁ နာရီအတွင်း လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တှောတှော ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြသဿသနာ ဖြစ်ရာကနေ စိတ်ဆိုးလွန်းအားကြီးလို့ ဘာအိုအက်စ်မှ မသွင်းဘဲ ဒီအတိုင်း ယူပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ကျွန်တှောတို့ ပြန်တော့ ည ကိုးနာရီ ကျှောနေပြီ။ ဘုန်းကြီးများလည်း တှောတှော စိတ်ညစ်သွားပါတယ်။ အလကားနေရင်း အကုသိုလ် ဖြစ်ရတာပါ။ ကျွန်တှောဖြင့် ဒေါသ ထွက်လွန်းလို့ တဆတ်ဆတ် တုန်နေပါတယ်။ ကိုယ်လိုက်ဝယ်ပေးခါမှ ဆရာတှောတွေ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာကိုလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ သူ့လူနဲ့ သူပဲ ကိုက်ပါတယ်။ အဆင့်အတန်း လူ့ယဉ်ကျေးမှု လုံးဝ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တှော့ ဘဝမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျှော ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီကုလားပြည်လောက် ဆိုးရွား ပေစုတ်တဲ့ လူမျိုး ညစ်တီး ညစ်ကျယ်ကြတဲ့ လူမျိုး မတွေ့ဖူးပါဘူး။ တစ်ခါလည်းမဟုတ် နှစ်ခါလည်း မဟုတ်။ နိုင်ငံခြားသားတိုင်း စိတ်ပျက်ရပါတယ်။
ကြုံလို့ ဟိုတစ်ခါ အင်တာနက် ကိစဿစ ပြောပြဦးမယ်။ ကျွန်တှော မသုံးရဘဲနဲ့ ကျွန်တှော့ အင်တာနက် ဆားဗစ်က ကုန်သွားပြီ ဆိုပြီး အင်တာနက် ဖြတ်လို့ ကျွန်တှော ဒင်းတို့ မန်နေဂျာကို သွားချဲပါတယ်။ သွားချဲတော့ ခွေးကုလားက ကျွန်တှော့စက်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ စပိုင်ဝဲလ်တွေ ဝင်နေလို့ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောတယ်ခင်ဗျ။ သူတို့ အိုင်အက်စ်ပီမှာတောင် အကောင် ၂၀ လောက် ရှိတယ်လို့ လာပြောလို့ ကျွန်တှောက ဟားတိုက်ပြီး မင်းတို့ဆီမှာ ရှိရင် ငါသတ်ပေးရမလား။ အိုင်အက်စ်ပီ လုပ်နေပြီး အဲဒီလောက် သောက်သုံး မကျရင် ဘာကို ယုံကြည်ရမှာလည်း ဆိုပြီး ပြန်ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူက သူတို့ဆီမှာ ကျွန်တှော သုံးသမျှ လော့ခ်တွေ ရှိပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ ထုတ်ပေးစမ်းပါဦးပြောတော့ ၁ လစာ ထုတ်ပေးတယ်။ စစ်ကြည့်တော့ ကြောက်ခမန်းလိလိ ကွာခြားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တှောလည်း ငါ့စက်က Branded ဖိုင်းယားဝေါလ်ရော အင်တာနက် စစ်ကျူရတီရော အပြည့်အဝ ကာကွယ်ထားတယ်၊ ပြီးတော့ ငါ့မှာလည်း ငါအင်တာနက် သုံးသမျှ အိုင်အက်စ်ပီ မှောနီတာ ရှိတယ်။ တိုက်ပြီး စစ်မယ်၊ ငါ့ကို ၁ ပါတ်စာ ငါသွားသမျှ ဆိုဒ်တွေရဲ့ လော့ခ် ငါဒေါင်းလုဒ် လုပ်သမျှ ဖိုင်လော့ခ်တွေ ပေးဆိုတော့ ကောင်းပါပြီ ကျွန်တှော အီးမေးလ် ပို့လိုက်ပါမယ်၊ ကျွန်တှော့ တက်ခနစ်ရှန်ကိုလည်း နောက် နှစ်ရက်ကြာရင် လွှတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီး ခုချိန်အထိ ပှေါမလာတော့ပါဘူး။ ကျွန်တှောက အီးမေလ်း သုံးစောင် ထပ်ပို့ပါတယ်။ ပြန်မလာပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလိုအလျောက် အင်တာနက်က ဆားဗစ် ပြန်ဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလူမျိုးတွေဟာ ဒီလူမျိုးတွေနဲ့ပဲတန်တယ်။ အဲဒီကောင်တွေကို အဲဒီလို ဆက်ဆံရတယ်ဆိုတာ ပိုပိုပြီး သဘော ပေါက်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကြုံလို့ မြန်မာပြည်ကနေ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ ကုလားလူမျိုး တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောမိတော့ ဒီနိုင်ငံက ကုလားတွေနဲ့တော့ စိတ်ကုန်ပါတယ်ဗျာ ဆိုပြီး ကုလားအချင်းချင်း အောချသွားတာ ကြုံလိုက်ရ ပါသေးတယ်။ စိတ်ဆင်းရဲပါတယ်ဗျာ။
Technorati Tags: Fucking India, Bullshit India, Stupid India, Nyi Lynn Seck, Myanmar Blog
Posted by NLS at 7/07/2006 01:53:00 AM0comments Links to this post
ဟောဒီ ငါ့လက်နှစ်ဘက်မှာ မာယာတွေ ပြည့်လို့နေတယ်
ငါ့နှုတ်ခမ်းများက လူသူနားမလည်နိုင်တဲ့ စကားတွေ ရွတ်ဆိုတယ်
အိပ်မက်ဟာ ငါ့အတွက် လှပတဲ့ ခံစားချက် ဖြစ်တယ်
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ အလင်းရောင်ဟာ ငါ့ဆီ တည့်တည့်ကျတယ်
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက တွန့်ကွေးပြီး လှပါတယ်
ငါက သူ့ကို မင်းသားလေးရဲ့ ပန်းကလေးလို့ ခှေါတယ်
သူ့မှာ ဝိုင်းစက်တဲ့ မျက်နက်ဝန်းတွေလည်း ရှိတယ်
အလင်းဟာ သူလှတာကို သူသိတယ်
ငါက သူလှတာကို ငါပဲ သိချင်တယ်
ငါ့ မနဿတယားများ သူနားမလည်
ငါ့ သွေးသားများ သူနားမလည်
ငါ့ နိမိတ်ပုံများ သူနားမလည်
ငါ့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များ သူနားမလည်
ငါ့ နန်းတှောအကြောင်း သူနားမလည်
ငါ နေချင်သော အမှောင်ကမဿဘာကို သူနားမလည်
ငါ့မှာ သူကြောက်စရာ အစွယ်နှစ်ချောင်းက ပါမလာခဲ့တော့
သူဟာ မနက်ခင်းမှာ ကိုယ်ရောင်ပြပြီး ညအခါ ပျောက်သွားခဲ့တယ်
တခြားဘက်မှာ သူပေါ့ပါးစွာ လင်းနေတယ်ဆိုတာ
မီးခိုးငွေ့တွေကြားမှာ ငါလေးလံစွာ မြင်နေခဲ့ရတယ်။
Technorati Tags: Nyi Lynn Seck, Myanmar Poem
Posted by NLS at 7/06/2006 01:14:00 PM0comments Links to this post
သူ့ကို ကျွန်တှောက ခင်လို့ ခှေါသည်။ ခင်သည် မမြင်ရသော ကောင်းကင်တစ်နေရာမှာ ပုန်းအောင်းနေသော ကြယ်လေး တစ်စင်း ဖြစ်သည်။ မင်းသားလေး ညွှန်ပြခဲ့စဉ်က ထိုကြယ်လေးက ခင်ဆိုတာ ကျွန်တှော မသိခဲ့ပါ။ ထိုကြယ်လေးကို ကျွန်တှော့ နေရာမှလည်း မမြင်တွေ့နိုင်ပါ။ သို့သှော ခင်ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တှော ခံစားလို့ ရနေပါသည်။ မောင်သိန်းဇှော၏ ခင်သည် ကျွန်တှော၏ ခင်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောကတော့ မောင်သိန်းဇှောလို ခင့်ကို မွေးနေ့အမှတ်တရ လက်ဆောင် မပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တှောပေးသော လက်ဆောင်ကိုလည်း ခင်က ယူမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တှော သိထားပါသည်။ ကျွန်တှောက ခင့်ကို ချစ်ပါသည်။ ထိုထက်ပို၍ ထိုချစ်ခြင်းကို ရေးပြလို့ မရပါ။ ထိုချစ်ခြင်းမှာ ကျွန်တှော့ရင်ထဲမှာ သိသော ချစ်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ခင်လည်း မသိနိုင်ပါ။
ခင်၏ ဆံပင်များမှာ ခပ်တိုတို ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းခလေးတွေ ဆံပင်ရှည်ရှည်နှင့် ဆိုလျှင် ကျွန်တှော နှစ်သက်သည်ဟု တစ်ခါပြောဖူးသောကြောင့် ခင်က အရှည်ထားပါသည်။ ခင်ဆံပင် ရှည်လာသောအခါ ကျွန်တှောက ဆံပင်ညှပ် လိုက်ပါလားဟု ပြောပါသည်။ ထိုအခါ ခင် စိတ်ကောက်ပါသည်။ သူ့ကို မချစ်လို့ ဆံပင်ညှပ်ခိုင်းတာလို့ ခင်က ထင်ပါသည်။ ကျွန်တှောက သူခေါင်းလျှောတိုင်း ဖျားတတ်သောကြောင့် ညှပ်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်တာကို သူမသိပါ။ အမှန်တော့ ခင်က ဆံပင်ရှည်နှင့် ဆိုလျှင် လွန်စွာ ကျက်သရေ ရှိပါသည်။ ခင်သုံးသော ဆပ်ပြာရည် ရနံ့လေးကို ကျွန်တှော တှောတှောလေး နှစ်သက်ပါသည်။ ထိုဆပ်ပြာ ရနံ့လေးကို အပြင်မှာ ရလိုက်တိုင်း ခင်များလားဟု ကျွန်တှော တခုတ်တရ လိုက်ရှာမိတတ်သည်။ ခင်သည် လေပြေကြားမှာလည်း မရှိပါ။ သို့သှော ခင်ရှိသည် ဆိုသည်ကို ကျွန်တှော ခံစားလို့ ရပါသည်။ ခင်သည် အရုပ်ကလေးများကို ကြောက်တတ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ သရဲ တစေဿဆကိုလည်း လွန်စွာမှ ကြောက်တတ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ခင့်ကို ကျွန်တှော တခါတရံ ရယ်ချင်သောကြောင့် သရဲ ခြောက်သည်။ သူ အလွန်ကြောက်သွားပုံကို မြင်ရလျှင် ကျွန်တှော စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါသည်။
ခင်က ကျွန်တှော့ကို ထမင်း ခွံ့ကျွေးရတာကို သဘောကျပါသည်။ ခင်အမြဲ ပြောနေကြ စကားတစ်ခွန်းရှိသည်။ ခင်ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်ကလူတွေက ထမင်း ခွံကျွေးလာရတာတဲ့ ကျွန်တှော့ကို ချစ်လွန်းလို့ သူက ပြန်ခွံ့ကျွေးတာဆိုပြီး ဖြစ်သည်။ ကျွန်တှောက ခင်ပျှောရွှင်အောင် ညာပါသည်။ ကျွန်တှော သူများ ခွံ့ကျွေးတာ ဘယ်တုန်းကမှ မစားဖူးဘူး ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကျွန်တှော့ မုသားကို မုသားဖြူဟု ကျွန်တှော သတ်မှတ်ပါသည်။ ခင့်ကို ညာလို၍ မဟုတ်ပါ။ ခင်ပျှောရွှင်တာကို မြင်လိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တမ်းတော့ သူ့အရင် ကျွန်တှော့ကို ခွံ့ကျွေးခဲ့သူများ ရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ခင်ခွံ့ကျွေးသော ထမင်းကို ကျွန်တှော မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာ ခင်သိလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တှော ထင်ပါသည်။ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်စွာ ညစာ စားသော အချိန်များတွင် ထိုအဖြစ်အပျက်လေးများကို ကျွန်တှော တှောတှောလေး သတိရပါသည်။ သို့သှော ကျွန်တှော့ ဘေးတွင် ခင်မရှိပါ။ သို့သှော ခင်ရှိနေသည်ကို ကျွန်တှော ခံစား၍ ရပါသည်။
ခင်က ရှက်တတ်ပါသည်။ ကျွန်တှော့ကို ချစ်တယ် တစ်ခါပြောဖို့ အတှောလေး နှုတ်ရွံ့တတ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ကျွန်တှော့အတွက် အဓိက မဟုတ်ပါ။ ခင်မပြောလည်း အသံတွေကို ကျွန်တှော ကြားရပါသည်။ ခင်သည် ရုပ်ရည်အားဖြင့် မလှပပါ။ သို့သှော ထိုမလှပခြင်းသည်ပင် ကျွန်တှော ခင့်ကို ချစ်ခြင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ခင်သည် အရင်က စကားများပါသည်။ ကျွန်တှောနှင့် ချစ်မြတ်နိုး ချိန်မှစကာ ခင်သိပ်စကား မပြောတော့ပါ။ ချစ်ခြင်း တရားသည် စကားလုံးတွေကို ရှားပါးစေ နိုင်ပါသလား။ ကျွန်တှော သိပါသည်။ ဒါပေမယ့် ခင်မသိပါ။ ခင်သည် ကျွန်တှော့ ရင်ခွင်ထဲတွင် ခေါင်းတိုးဝင်ပြီး ချွဲနွဲ့တတ်ချင်သူ ဖြစ်သည်။ သို့သှော ခင်မချွဲနွဲ့တတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တှော အသေအချာ သိသည်။ ထိုအခါ ကျွန်တှော ရယ်ပါသည်။ ထိုအခါ ခင်ရှက်တတ်ပါသည်။ သူ့ကို လှောင်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ရယ်ခြင်းမှာ သဘောကျလို့ ရယ်ခြင်း၊ မချိတင်ကဲ ရယ်ခြင်း၊ စိတ်ညစ်လို့ ရယ်ခြင်း၊ ဟန်ဆောင်ပြီး ရယ်ခြင်း စသည် စသည်ဖြင့် အမျိုးစုံစွာ ရှိသှောလည်း ခင်သတ်မှတ်ထားသော ကျွန်တှော၏ ရယ်ခြင်းမှာ လှောင်ရယ်ခြင်း ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ထိုအတွက် ကျွန်တှော့မှာ အဖြေမရှိပါ။ ဘာလို့လည်း ဆိုလျှင် ချစ်ခြင်းတရားသည် စကားလုံးများကို ရှားပါးစေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ဒီစာကို ရေးနေချိန်တွင် ကျွန်တှော့ ဘေးနားမှာ ဆပ်ပြာနံ့ သင်းသင်းလေး ရသည်။ ခင့်ကို အမြဲသတိ ရစေဖို့ရာ ခင် သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တှော နားလည်ပါသည်။ ခင်သည် တစ်ခုသော ရက်က သေဆုံး သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တှော့ကို ဒုကဿခတစ်စုံ တစ်ရာ မပေးဘဲ ခင်သေဆုံး သွားခဲ့သည်။ ခင်သေဆုံး သွားသောအခါ ကျွန်တှော မငိုမိပါ။ ကျွန်တှော့ ရင်ထဲတွင် မျက်ရည်ထက် လေးနက်သော အရာများ ရှိနေပါသည်။ ခင်မရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် ခင်ကျွန်တှော့ အနားမှာ ရှိနေဆဲ ဆိုတာကို ကျွန်တှော ခံစားလို့ ရနေပါသည်။ ဆပ်ပြာရနံ့လေး လွင့်ပျံလို့ လာနေသည်။ ထိုဆပ်ပြာ ရနံ့လေးနှင့် ကျွန်တှော အိပ်စက် ဖို့ပြင်လိုက်ပါတော့သည်။ မနက်ဖြန်တွင် ခင့်အတွက် မပေးဖြစ်လိုက်သော လက်ဆောင် တစ်ခုကို ကျွန်တှော ကျွန်တှော ပေးဖို့ ရှိပါသည်။ ထိုအရာမှာ အမှောင်ထုထဲတွင် နီကိုရဲ မြင်လိုက်သော အရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ခင်ဆိုသော နာမည်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ ဒီကမဿဘာပှေါမှာ မရှိခဲ့ဘူးသော နာမည် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Technorati Tags: Khin, Nyi Lynn Seck, Myanmar Essay
Posted by NLS at 7/06/2006 04:50:00 AM0comments Links to this post